REPUBLICADAINIK | कांग्रेसको कुरा नमानेका महन्थ ठाकुरको सपना उडायो, गुटको गोप्य बैठक - REPUBLICADAINIK
कांग्रेसको कुरा नमानेका महन्थ ठाकुरको सपना उडायो, गुटको गोप्य बैठक
काठमाडौं । एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोरक्रस गरेर आफ्नै सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई असली पावर देखाएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई सबैभन्दा ठूलो धक्का लागेको छ ।
ओलीलाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागी हुने र प्रधानमन्त्री हुने सपना देखेका ठाकुरले बिहीबार सिंहदरबारमा पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदहरूलाई बोलाएर दुखेसो पोखेका छन् । आफू निकटका सांसदहरूलाई मात्रै बोलाएर ठाकुरले ओलीसँग भइरहेको वार्ता र सरकारमा साझेदारीका विषयमा कुराकानी गरेका हुन् ।
ठाकुरले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाईसघाउन नसकिने पूर्व राजपाका सांसदहरूलाई जानकारी गराएका छन् ।
जसपाका मागबारे सरकारसँग छलफल चलिरहे पनि अहिलेसम्म माग पूरा नभएको ठाकुरले बताएको एक सांसदले जानकारी दिएका छन् ।
ठाकुरले पूर्व राजपाको संसदीय दलको कार्यालयमा गुटको भेला राखेका हुन् । गुटको भेलामा उपेन्द्र यादव समर्थक सांसद अर्थात पूर्व संघीय समाजवादी पार्टीलाई बोलाइएको थिएन । ठाकुरले ओलीसँग भइरहेको वार्ताका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।
बैठकपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको पछिल्लो छलफलको बारेमा ठाकुरले सांसदहरुलाई ब्रिफिङ गरेको जानकारी दिएका छन् ।
मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाइ, नागरिकता समस्या, संविधान संशोधनलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको छलफलको बारेमा अध्यक्ष ठाकुरले सांसदहरुलाई जानकारी गराउँदै अहिले पनि माग पूरा भइनसकेको बताएका थिए ।
ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीसँग हुँदै आएको छलफलबारे पार्टीभित्रैबाट भ्रम छर्ने काम भइरहेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन् ।
सांसद कर्णले पूर्व राजपाका सांसदहरूको सहभागिता रहेको बैठकमा ठाकुरले कतिपय विषयमा अस्पष्टता रहेकाले त्यसलाई प्रष्ट पार्न अनौपचारिक छलफल गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अध्यक्ष ठाकुरले आफूहरूले उठाउँदै आएको माग कुनै पनि पूरा नभएको र कतिपय प्रक्रियामा रहेको आश्वासन पाएकाले त्यो पूरा भएपछि मात्रै सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे टुंगो लगाउने सांसदहरूलाई बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली जसपा नेपालले राखेको मागप्रति सकारात्मक रहेको र अहिलेसम्म माग पूरा हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि ठाकुरले बैठकमा बताएको एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा जसपा नेपालमा विवाद छ । अध्यक्ष ठाकुर प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा छन् । अर्का अध्यक्ष यादव प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा छन् ।
दुई निलम्बितबाहेक ३२ सांसद रहेको जसपामा तत्कालीन राजपाका तर्फबाट १६ सांसद छन् । जसपाका एकजना सांसद रेशम चौधरी जेलमा छन् । अर्का एकजना हरिनारायण रौनियार निलम्वनमा परेका छन् ।
तत्कालीन समाजवादी पार्टीका १६ सांसद रहेका छन् । सरकारमा जानेबारे विवाद भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने अवस्था आएमा पार्टी विभाजन या फ्लोर क्रस हुने सम्भावना रहन्छ ।
त्यसले गर्दा दुवै पक्षले आ–आफ्ना सांसदहरूसँग नियमित छलफलहरू गर्दै आएका छन् । हालसम्म जसपाको संसदीय दल समायोजन भएको छैन । संसदीय दल समायोजन नभए पनि जेष्ठताका आधारमा महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा जसपा नेपालको संसदीय दलको संयुक्त बैठक दुई पटक बसिसकेको छ ।
जसपाका अध्यक्ष ठाकुरलाई अनुदारवादी नेताका रुपमा पहिचान बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । ठाकुरले जातीय कुरा र एजेण्डा बोक्ने गरेको आरोप पनि छ । छिटो रिसाउने ठाकुरले विवाह गरेर आउनेवित्तिकै भारतीय महिलालाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
भारतमा नेपाली महिलाले विवाह गरेर जाँदा ७ वर्ष पर्खिनुपर्ने प्रावधान छ । नेपालमा पनि विवाह गरेर आउने भारतीय महिलालाई सात वर्षपछि नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव नागरिकता विधेयकमा छ । ठाकुरलाई यो प्रस्ताव मन परेको छैन ।
Published : Thursday, 2021 April 22, 10:11 pm
यी हुन् कांग्रेसका दानवीर नेता, कोरोनाका बिरामी ओसार्न दिए आफ्नै गाडी, उपचार केन्द्र बनाउने
देउवाद्वारा दाहाल–यादवसँग वार्ता, संख्याबारे कानूनी परामर्श
तराई टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिएर विवादमा परेका ठाकुरलाई ओलीले प्रधानमन्त्री बनाउने
गगनले दिए सरकार बनाउने बिकल्प, अबको छ महिनाभित्र निर्वाचन
कांग्रेससहित तीन दलको माग अनुसार भण्डारीको आह्वान, अब ओलीको हालत के होला ?
ओली सरकार ढल्नेवित्तिकै तीन दलद्वको यस्तो आयो धारणा, दायाँबायाँ नगर्न शीतल निवासलाई खबरदारी
अधिवक्ता अर्यालको घोषणाले मुर्छा परेका ओलीलाई खुसीको बहार
देउवाले ओलीविरुद्ध बोलेको ऐतिहासिक दस्तावेज
मनमा लागेका कुरा, ममता बनर्जीले जस्तै जोखिम लिन सक्छौँ ?
‘गिरिजाबाबुलाई थाहा थियो’